Dad ka careysan waddooyinka xiran ee Muqdisho oo maalintii labaad banaan bax jidgooyo ah dhigay
Darawalada Gaadiidka dadweynaha ee isugu jira BL-ka iyo Mooto Bajaajta ayaa maalintii labaad banaan bax ka wada magaalada Muqdisho, iyagoo banaan baxooda ku salleynaya cabasho ku aadan xirnaanshaha waddooyinka xiran ee magaalada.
Sagal Radio Services • News Report • October 26, 2019
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare Senator Abshir Bukhaari ayaa sheegay inuu aad uga walwalsan yahay xaalada murugada leh ee bani’aadanimo ee ka dhalatay fatahaada wabiga Shabeelle, kaasoo saameeyay kumanaan qoysas oo ku sugan magaalada Beledweyne.
Sagal Radio Services • News Report • October 21, 2019
Meydka Taliyihii Ururka Gorgor ee ka tirsan Kumaandooska Ciidanka xoogga dalka ayaa habeenkii 3aad baryay, iyadoo aan la aasin, kaddib markii uu muran ka dhashay dilkiisa iyo sababta loo dilay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta u ambabaxay dalka Ruushka, halkaasoo uga qeyb galayo shirkii u horeeyay ee u dhaxeeya Ruushka iyo Afrika.
Senator ka tirsan Aqalka Sare oo ka hor-yimid go’aan ka soo baxay Puntland
Sagal Radio Services • News Report • October 20, 2019
Senator Maxamuud Mashruuc oo ka tirsan Aqalka Sare ayaa ka hor-yimid go’aankii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo ay ku mamnuucday Xafiisyo ay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda ka furteen deegaanada Puntland.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo kulankooda u horeeyay ee Kalfadhiga 6aad ku yeelanaya xarun cusub
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta yeelanaya kulankii u horeeyay ee kalfadhiga lixaad, kaddib markii 9-kii bishan uu si rasmi ah kalfadhiga 6aad ee Baarlamaanka u furay Madaxweyne Farmaajo.
Daawo Sawirada Taalooyinka Muqdisho oo dayactir lagu sameeyay xarigana laga jaray
Sagal Radio Services • News Report • October 18, 2019
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarigga ka jaray taallooyinka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, SYL, Dhagaxtuur, Xaawo Taako iyo Axmed Gurey oo dhammaantood dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey.
Taliyihii Guutada Gorgor ee Kumaandooska Xoogga dalka Maxaadeey Saleebaan ayaa caawa lagu dilay is rasaaseyn ka dhacday agagaarka Ex Hotelka Naasahablood 2 ee ku dhow Xaawo Taako.
Mooshin ka dhan ah Ciidamada Kenya oo lau wado in la horgeeyo Baarlamaanka
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa wada ololihii u dambeeyay ee ay kaga keenayaan mooshin ka dhan ah Ciidamada Kenya ee jooga qeybo ka mid ah Soomaaliya.
Kheyre “Qof walba oo naga mid ah mucaarad iyo muxaafad waxaa taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalino qarannimada iyo…
Sagal Radio Services • News Report • October 10, 2019
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in aanay marnaba aqbali doonin cid kasta oo is hor-taagta dib u yagleelida Qaranimada Soomaaliya, isla markaana aanu gorgortan ka geli doonin.
Faahfaahin ka soo baxaysa diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Wararka ka imanaya garoonka diyaaradaha Adan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad nooca xamuulka qaada ah ay lugaha u bixi waayeen balse ay degtey iyadoo aan wax waxyeelo ah geysan.
Xilliga uu furmayo kalfadhiga 6aad ee Baarlamaanka oo la shaaciyay iyo Xildhibaannada oo degdeg…
Sagal Radio Services • News Report • October 5, 2019
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa degdeg isugu yeeray Xildhibaanada, si ay uga soo qeyb galaan furitaanka Kalfadhiga 6aad ee Golaha.
Wasiirka Arrimaha Dibbadda oo ka hadlay safaarada Soomaaliya ee Washington
asiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Danjire; Axmed Ciise Cawad , ayaa ka faah-faahin ka bixiyay dib u furista Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay.
Qarax xooggan oo goor dhaw ka dhacay magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • September 30, 2019
Waxaa goor-dhaw qarax aad u xoogan oo jugtiisa looga maqlay inta badan magaalada Muqdisho uu ka dhacay agagaarka Isgooska Kuliyadda Jaalle Siyaad.
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay arrinta Ciise Tarbuun (War saxaafadeed)
Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay arrin saacadihii la soo dhaafay aad loo hadal hayay, kaasoo ahaa nin lagu magacaabo Ciise Tarbuun oo Booliska Kenya ay sheegeen inuu gudaha u soo galay dalkooda, iyadoo ninkan oo horay dowladda Federaalka u qabteen labo sano ka hor lagu tilmaamay inuu ahaa Madaxii Amniyaatka Al-Shabaab u qaabilsan Muqdisho.
Kooxo hubeysan oo toogasho ku dilay Haweeney caan ka aheyd Suuqa Bakaaraha
Dowladda Federaalka oo ku dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyadii Kismaayo
Dowladda Federaalka ah Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyadii Kismaayo, kaddib markii todobaadkii hore ay xayiraad saartay.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Oomaar ayaa ka hadlayey go’aankii dowladda ay soo saartay ee la xiriiray duulimaadyada Kismaayo.
Muqdisho, Khamiis, September 19, 2019—Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS). ayaa maanta guddoomiyay shir ay kasoo qayb galeen safiirrada wadamada amniga ka taageeraa Soomaaliya iyo wakiillada beesha caalamka, loogana hadlay amniga iyo xoreynta deegaannada argagaxisadu uga sugantahay dalka.
Wasiirka Waxbarashada Goodax Barre oo dhaliilay tayada aqoonta Macalimiinta dalka
Sagal Radio Services • News Report • September 4, 2019
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay heerka waxbarashada dalka isagoo sheegay in tayada macalimiinta dalka ay aad u liidato ayna u baahan yihiin tababar.
Taliyaha Ciidanka Booliska oo la kulmay saraakiil Turkey ah
Taliyaha Ciidanka Booliiska Dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay maanta saraakiil ka socota safaarada Turkiga ee Muqdisho qeybteeda u qaabilsan Tababarada Booliiska soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa markii ugu horeysay kulan la qaatay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kaas oo ujeedkiisu ahaa mid uu duqa Muqdisho ku xog wareysanayay madaxda degmooyinka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la kulmay Musharaxa Madaxweynaha Galmudug C/raxmaan Odawaa iyo Xildhibaannada UPD
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Musharaxa Madaxweynaha Galmudug C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ay wehliyeen Xildhibaano Saaxibadiisa ah ee ay iskala tirsan yihiin Xisbigada UPD, kana soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo difaacay go’aanka dowlada ee qaraarka Alshabaab
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa ka hadlay go’aankii dowladda federaalka ay ugu hor timid qaraarkii Kenya ee ka dhan ahaa Al-Shabaab.
Cumar Filish oo ballanqaaday in la furi doono waddooyinka xiran ee Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • August 29, 2019
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir,Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa goor dhow la wareegay xilkaa, ka dib xaflad goor dhow lagu soo gabagabeeyay xarunta dowladda hoose ee Xamar.
Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka ayaa taageeray go’aankii Wasaaradda arrimaha Gudaha ee 22kii bishan Agoosto ay ku caddeysay inaysan oqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinkii aan loo marin habraaca saxda ah ee ka dhacay Kismaayo.
NISA oo soo bandhigtay xubin sare ka tirsan Warbaahinta Al-Shabaab oo lagu qabtay howlgal
Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa shaaca ka qaaday in xubin sare oo ka tirsan Warbaahinta Al-Shabaab lagu qabtay howlgal laga sameeyay degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • August 24, 2019
Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xaflada xilwareejinta guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow magacaabay Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka sida, iyadoo si buuxda Taliyaha NISA loogu magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo muddo 10 bilood ahaa Sii Haye.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish).
Madaxweyne Farmaajo oo salaadda Ciida ku dukaday Masjidka Shuhadada ee Madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • August 11, 2019
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa salaadda Ciidda Carafo ku tukaday Masjidka Shuhadada Madaxtooyada Qaranka.
Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay Maqaamka Muqdisho
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ka hadlay maqaamka Muqdisho isagoo ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya inuu ka doodo oo uu ansixiyo maqaamka Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • August 10, 2019
Muqdisho, Ogoosto 10, 2019; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee Ciidul Adxaa.
Taariiq nololeedka Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cismaan”Yariisow”
Allaha u naxariistee Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabatay dalka sidii ay uga caawin lahaayeen in dalka uu lugihiisa isugu taago.
Wasiir Cawad iyo Guddiga arimaha dibada Golaha Shacabka oo kulan ku yeeshay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • July 28, 2019
Guddiga arrimaha dibadda ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Xukuumada Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad.
Wasaaradda A. Gudaha oo shaacisay in Liiskii odayaasha dhaqanka Jubbaland uusan aheyn mid sax ah
Sagal Radio Services • News Report • July 24, 2019
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Liiska Odayaasha dhaqanka Beelaha ee soo xulaya Xildhibaanada Jubbaland uusan waafaqsaneyn diiwaanka Wasaaradda ee dhaqanka rasmiga ee Beelaha Jubbaland.
Wasiirka Warfaafinta oo ka warbixiyay khasaaraha qaraxii Xarunta Gobolka Banaadir
At least seven people were killed and 27 others wounded when a bomb went off outside a hotel near the international airport in Somalia’s capital Mogadishu on Monday, medical officials said.
Akhriso: Guddoomiye Mursal oo magacaabay Guddi KMG ah oo soo diyaariya sharciga doorashooyinka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa magacaabay Guddi Kumeel gaar ah, si ay soo diyaariyaan Sharciga Doorashooyinka Qaran.
Shirkad Turkey ah oo bilowday dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye
Waxaa maanta ay bilowday shirkad laga leeyahay dalka Turkiga dhismaha wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Farmaajo oo la kulmay Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika.
Sagal Radio Services • News Report • July 20, 2019
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Madaxtooyada kula kulmay wafdi ka socda Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD oo uu hoggaaminayey Thabo Mbeki Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika.
Dowladda Soomaaliya ayaa u dhameystirtay qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen Urur ka tirsan Guutada 14 October oo ku jira Xerada Jen. Gordon ee ku taal degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • July 17, 2019
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dilal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku beegsatay saraakiil ka tirsan Ciidanka Milateriga iyo Booliska.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay Guddiga Dhab u heshiisiinta iyo Wada Hadalada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan qarax ay ku dhinteen labo ruux saddex kalana ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Galmudug Xaaf oo Muqdisho soo gaaray lana kulmay Madaxweyne Farmaajo
Maxamed Qanyare Afrax oo saaka ku geeriyooday magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • June 29, 2019
Maxamed Qanyare Afrax oo horay u soo noqday Wasiirka Amniga Qaranka iyo Xildhibaan ayaa saaka ku geeriyooday magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen eheladiisa.
Madaxweyne Farmaajo:”Abwaan Sangub waxa uu qayb libaax ka qaatay koboca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed.”
Sagal Radio Services • News Report • June 18, 2019
Hey’adda NISA oo shaqada ka eriday xubno lagu eedeeyay xil gudasho la’aan [Wareegto]
Wareegto ka soo baxday Hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka (NISA) ayaa lagu eryay xubno ka tirsanaa Hey’adda, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka hor yimaadeen hannaanka shaqo gudasho.
Sagal Radio Services • News Report • June 15, 2019
Waxaa soo baxaya faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qarax labaad oo goor dhow laga maqlay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisey shirar maamlaamahn magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga socda qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada.
Maraykanka ayaa Talaadadii sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada amniga ee lagu taageerayo xasillinta Soomaaliya iyo dagaalka al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibbada Norway Ine Marie Eriksen Søreide
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway Ine Marie Eriksen Søreide oo maanta booqasho ku timid dalka.
Sagal Radio Services • News Report • June 9, 2019
Faah faahin: Weerar lagu qaaday Xarunta Maamulka deegaanka Garasbaaley
Sagal Radio Services • News Report • June 2, 2019
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar Kooxo hubeysan ay ku qaadeen xarunta Maamulka deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho.
Ra'iisul wasaare Khayre oo u ambabaxay dalka Qatar
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa galinkii hore ee Sabtida maanta u ambabaxay magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar.
Daawo: Ra’iisul Wasaaraha oo xalay kormeeray illaa 30 Isgoys iyo Koontaroolada ciidamada
Sagal Radio Services • News Report • May 29, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay saqdii dhexe kormeer kedis ah ku tagay Illaa 30 Isgoys oo ka mid ah isgoysyada waddooyinka Muqdisho, isagoo u kuur galayay xaalada nabadgelyo iyo sida Ciidamada Amniga u sugaan.
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay Sacuudiga
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u ambabaxay dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, isagoo magaalada barakaysan ee Makkah uga qeyb gali doona Shir Madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC).
Wariye ka howlgalla Muqdisho oo la xiray
Hay'adda dambi baarista Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay wariye lagu magacaabo Cali Aadan Muumin oo ka howlgalla caasimadda Muqdisho, sida laga soo xigtay warbaahinta uu ka howlgallayay ee Goobjoog Media.
Xukuumada Soomaaliya oo ku eedeysay maamul goboleedyada inay dano ka leeyihiin diidmada Sharciga Batroolka.
Wasiirka Batroolka Xukuumadda Soomaaliya C/rashiid Maxamed Axmed ayaa markii u horeysay ka hadlay diidmada ay maamul goboleedyada kala hor ymaadeen sharciga Batroolka, kaasoo todobaadkii hore ay meel mariyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankooda Khamiislaha ee maanta ku ansixiyay magacaabida Illaa Shan Safiir oo cusub.
Ciidamo loo diyaariyay ka hortagga Rabshadaha oo lagu soo bandhigay Muqdisho iyo banaan bax laga cabsi qabo…
Sagal Radio Services • News Report • April 18, 2019
Dowladda Soomaaliya ayaa galabta Xarunta Xisbiga ee degmada Wardhiigley ku soo bandhigtay ciidamo loo diyaariyay ka hortagga Rabshadaha, iyadoo ciidamadan ay dhoolatus u yihiin banaan bax la qorsheynayo inuu berri ka dhaco Muqdisho.
C/raxmaan C/shakuur “Waa xaq dastuuri ah in dadka Muqdisho ay isku soo bax ku muujiyaan dareenkooda”
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa difaacay in dadka Muqdisho ay sameeyaan isku soo bax nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda, isagoo si kulul u weeraray sida dowladda u dooneyso inay u hor-istaagto dareenka shacabka.
Muxuu Dastuurka ka qabaa kulamada iyo banaan baxyada [Akhri qodobka 20aad ]
Dood badan ayaa ka taagan banaan baxa la hadal haayo inuu Muqdisho ka dhacayo, iyadoo saacadihii la soo dhaafay warbaahinta dowladda ka hadlayeen siyaasiyiin iyo Culumaa’udiin, kuwaasoo mamnuucaya in banaan bax la qabto.
Qarax ayaa goor dhow ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, kaasoo ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa lagu xiray.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea iyo La Taliyaha Madaxweynaha Eritrea oo soo gaaray Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea Cusmaan Saalax iyo La Taliyaha Madaxweynaha Eritrea Yemane Gabreab ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Sagal Radio Services • News Report • November 26, 2018
Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimuu oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay Xukuumadda Soomaaliya inay caburin ku heyso Suxufiyiinta.
Sagal Radio Services • News Report • November 16, 2018
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Amb Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Oo Maalmahanba Booqasho Ku Jooga Isaga Iyo Wafdi Uu Hogaaminayo Jamhuuriyadda Turkiga Ee Waqooyiga Cyprus ayaa la kulmaya madaxda Cyprus.
Wasaaraddo ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya oo la sheegay in Korontada laga goostay
Sagal Radio Services • News Report • November 13, 2018
Wasaaraddo ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in korontada laga goostay, kaddib markii lagu yeeshay lacago.
Madaxweyne Farmaajo oo ku amray Taliyaasha ciidamada inay warbixin dhamaystiran ka keenaan Qaraxyadii Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • November 11, 2018
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan deg deg ah isugu yeeray Taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo ku dhintey qarax ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • November 8, 2018
Cabdiweli Maxamed Ibraahin oo kamid ahaa xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle ayaa ku dhintey qarax ka dhacay goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo berri u kicitimaya magaalada Gondor ee dalka Itoobiya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane, Maxamed C/llaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa inuu berri oo jimaca ah u ambabaxo Magaalada Gondar, Gobolka Baxar-daar ee Dalka Itoobiya.
Madaxweynaha Faransiiska oo joojiyay dhammaan safarada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga
Sagal Radio Services • News Report • October 18, 2018
Shaqaalaha Haga diyaaradaha soo caga dhigta Garoonka Muqdisho oo shaqo joojin sameeyay
Sagal Radio Services • News Report • October 3, 2018
Waxaa saaka hakad ku jira howlihii Garoonka Diyaaradaha Aadan cadde, kaddib markii ay shaqo joojin sameeyeen hagayaasha diyaaradaha marka ay soo caga dhiganayaan Garoonka ee loo yaqaano (Marshal)
Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xaadiray Fadhiga Baarlamaanka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, inta noloshiisa ka dhiman ayaa maanta xaadiray Fadhiga Baarlamaanka ee xarunta Golaha Shacabka, kaasoo ay ka soo qeyb galeen 178 Xildhibaan.
Sagal Radio Services • News Report • September 27, 2018
Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka ayaa u yeeray Wasiirka Gaashaandhigga iyo Saraakiisha xoogga dalka, iyagoo wax ka weydiinaya tacadiyada iyo dhibaatooyinka Ciidamada Milateriga u geystaan dadka Rayidka.
Waxaa saaka xiran qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo dadka ay si lama filaan ah ku soo tooseen Ciidamo ku sugan qaar ka mid ah Isgoysyada oo loo diiday gaadiidka dadweynaha iyo kuwa caadiga inay maraan, marka laga reebo kuwa ciidmada saaran yihiin.
Maamulka Gobolka Banaadir oo dhiira geliyay Ololaha Dalxiiska Caasimadda
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku qabtay xeebta degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho barnaamij ka mid ah Olalaha Dalxiiska Caasimadda.
Shirkii labaad oo bil gudaheed uu iclaamiyo Madaxweyne Farmaajo oo baaqday
Sagal Radio Services • News Report • September 24, 2018
Waxaa mar kale baaqday shirkii labaad oo uu bul gudahood ku baaqo Madaxweyne Farmaajo, iyadoo khilaafka u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada uu sabab u noqday labo shir oo Madaxweynuhu ku baaqo inay ka dhici waayaan magaalada Muqdisho.
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta oo Shaqo joojin ku sameeyay Xoghayihii Joogtada Wasaaradda (Akhriso)
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Soomaaliya C/rashiid Maxamed Axmed ayaa shaqo joojin ku sameeyay Xoghayihii Joogtada Wasaaradda Jamaal Qaasim Mursal, kaddib wareegto uu soo saaray Wasiirka.
Ciidamada hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa xalay waxa ay xabsiga dhigeen Taliyaha Hoggaanka caafimaadka ee hay’addaasi Dr Xasan Axmed Maxamed Gacal.
Qaraxyo isxigay oo goor dhow ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama
Sagal Radio Services • News Report • September 22, 2018
Labo qarax oo is xigay ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Wadada Maka Almukarama.
Ra’iisul Wasaaraha oo Isbitaalka ku booqday Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow
Sagal Radio Services • News Report • September 16, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay Isbitaalka Digfeer ku booqday Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow oo xalay ku dhaawacmay qarax miino gaarigiisa loogu xiray.
Wafdigii u horeeyay ee ka socda Aqalka Sare oo maanta u ambabaxay Puntland
Wafdigii u horeeyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u diro dowlad goboleedyada, si ay u baadigoobaan xalinta khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta u ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.
Ciidamada NISA ayaa howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho ku qabtay xubin ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab.
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada Huriwaa ee Gobolka Banaadir ayaa waxay ku dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo hoygiisa ku booqday Madaxweynihii hore Xasan Sheekh
Sagal Radio Services • News Report • August 31, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa hoygiisa ku booqday Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha oo ka hadashay la soo wareegitaanka Stadium Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • August 28, 2018
Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa ugu hambalyeysay bahda isboortiga dalka la soo wareegida garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho.
Wasiirka Qorsheynta oo hal mar magacaabay Xoghaye Joogto iyo Agaasime
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka oo sheegay in la dhisayo golaha adeegga Garsoorka
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed, ayaa sheegay in la dhisi doono golaha adeegga Garsoorka oo aanan shaqeyn tan iyo wixii ka dambeeyay markii la kala diray sanadkii 2015.
Iyadoo maalmihii ugu danbeeyay-ba xafiiska hanti-dhowrka guud ee dowladda Soomaaliya uu ku howlanaa daba-gal lagu sameynayo hay’addaha iyo mas’uuliyiinta dowladda oo qaarkood hadda xabsiga loo dhigay arrimo musuq-maasuq la xiriira ayaa sheegay in isla xisaabtanku gaari doono xafiis-yada madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha dalka.
Wasaarada Dastuurka oo u bandhigtay guddoomiyaha Baarlamaanka caqabadaha ka hortaagan dib u eegista Dastuurka
Sagal Radio Services • News Report • August 14, 2018
Guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa maanta xarunta golaha shacabka kula kulmay xubno uu hogaaminaayay wasiir ku xigeenka wasaarada Dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Cilmi.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea oo xalay ku hoyday magaalada Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea Cusmaan Saalax ayaa xalay ku hoyday magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, iyagoo wada hadalo la yeeshay Madaxda ugu sareysa dalka.
DEG DEG: Ra’iisul Wasaare Kheyre oo shaqo joojin ku sameeyay Wasiir kuxigeenka A. Dibadda
Sagal Radio Services • News Report • August 9, 2018
Qaar ka mid ah dhallinyarada Magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Axad ah iskugu soo baxay waddooyinka, iyaga oo dowladda ka dalbanayay in ay ilaaliso nabadgelyadooda, xilli ay kordheen dilalka Magaalada oo lala beegsanayo dhallinyarada. Isku soo baxaan ayaa ka dhacay Isgoyska KM5 ee Zope, waxaa uuna imaanayaa xilli maalintii Khamiista ...
Sagal Radio Services • News Report • July 26, 2018
Ciidamo ka tirsan kuwa Ammaanka ayaa xalay gurigiisa kala baxay Agaasime Wasaaradeed oo ka tirsan Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya.
Qarax ka dhashay gaari oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2018
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday, halka saddex kale ay ku dhaawacmeen, kaddib qarax gaari oo ka dhacay agagaarka Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
Guddiga Amniga Qaranka oo ku amray in muddo 48 saac gudahood la furo jidadka xiran ee Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalau kulan xalay degdeg ah isugu ueerau Guddiga Amniga Qaranka, si looga jawaabo cabashooyinka shacabka ee ku aadan waddooyinka xiran ee magaalada, kaasoo saameyn ku yeeshay dhaq dhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka dadka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dalka Qadar
Sagal Radio Services • News Report • July 18, 2018
Kusimaha Madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Amb Mohamed Mursal Sheikh ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dowladda Qadar ee Soomaaliya Amb. Xasan Xamza.
Afar Xisbi oo war murtiyeed ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee dalka, ka hor shirka Brussels
Afar xisbi siyaasadeed oo mucaaradka ah ayaa war murtiyeed ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee dalka, kaddib kulan labadii maalmood ee la soo dhaafay u socday, iyadoo qodobada laga soo saaray looga hadlay dhacdooyinkii u dambeeyay iyo tallaabooyinkii ay qaaday dowladda Federaalka.
DEG DEG: Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay Muqdisho iyo rasaas la maqlayo
Sagal Radio Services • News Report • July 7, 2018
Qarax xooggan ayaa goor dhow laga maqlay magaalada Muqdisho, kaasoo ahaa mid jugtiisa laga maqlay magaalada oo dhan.
Gaari ay la socdeen Ciidamo ka tirsan Milateriga oo dad ku jiiray Muqdisho
Gaari ay la socdeen Ciidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya ayaa saaka dad ku jiiray Wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare Kheyre “Dhalinyaradu waa maskaxda, xoogga iyo dhaqaalaha dalka”
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay soo xiray Shirweynaha 3aad ee Hoggaanka iyo Hal-abuurka oo lagu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in xoogga, maskaxda, dhaqaalaha iyo awood waliba oo dalku kula tartamaayo aduunyada kale ay yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed.
Sagal Radio Services • News Report • July 6, 2018
Xildhibaannada maamul gobolleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Ra’iisul Wasaaraha oo kormeeray Dugsiga Tababarka Jen. Gordon ee horay Imaaraadka u maamulayeen
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa khamiistii shalay kormeer ku tagey Dugsiga tababarka Ciidamada Gen. Gordon ee Magaaladan Muqdisho, halkaasoo ay horay u maamulayeen Imaaraadka Carabta.
Gabar Wariye ah oo maanta lagu dhaawacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • June 28, 2018
Gabar Wariye aheyd oo ka tirsan Warbaahinta dowladda ayaa maanta duhurkii lagu dhaawacay magaalada Muqdisho
Toos u Daawo: Imaanshaha Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ee magaalada Muqdisho
Diyaaradda sida Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa goor dhow soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ka socdo diyaar garow aad u ballaaran.
Sagal Radio Services • News Report • June 14, 2018
Illaa saddex carruur oo walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab xalay ka kacay xero barakacayaal oo ku taal degmada Wadajir, kuna dhow Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Belgium
Sagal Radio Services • News Report • June 12, 2018
Ciidamada ammaanka oo kordhiyay xirnaanshaha waddooyinka Muqdisho iyo isu socodka magaalada oo adkaaday
Sagal Radio Services • News Report • June 9, 2018
Hey’addaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa kordhiyay xirnaanshaha waddooyinka Muqdisho, iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu adkaaday isu socodka xaafadaha Muqdisho.
Meydadka labo ruux oo lagu arkay xaafado ka tirsan Muqdisho
Meydadka illaa labo ruux oo mid ka mid ah uu ahaa Oday da’ ah ayaa lagu arkay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dilal kala duwan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho
Waxaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho dilal kala duwan oo ay geysteen kooxo bastoolado ku hubeysan, iyadoo duhurnimadii maanta ay rag hubeysan degmada Waaberi ku dileen shaqaale ka tirsan Baarlamaanka, halka mid kalena dhaawacmay.
Daawo Sawirro: Saameynta iyo khasaarihii uu sababay Roobabkii ka da’ay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 20, 2018
Waxaa saacadihii la soo dhaafay ka da’ayay magaalada Muqdisho roobab xooggan, kaasoo saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana roobabka ay waxyeelo u geysteen jidadka qaar ee magaalada iyo guryo soo dumay.
Ra’iisul Wasaaraha oo xalay kormeeray saldhigyada iyo koontaroolada laga sugo amniga Muqdisho
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kahyre oo ay wehliyeen Wasiirka Amniga, guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir, saraakiisha Booliska iyo Asluubta ayaa xalay kormeeray qaar ka mid ah saldhigyada degmooyinka Gobolka Banaadir iyo koontarooladda maagaaladda, iyagoo u kuur galayay xaaladda guud ee amniga caasimadda.
Wasiirka Amniga oo ka hadlay qaraxyadii iyo jugtii caawa gilgilshay magaalada Muqdisho
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in jugtii iyo dhawaaqii cuslaa ee caawa ka dhacay magaalada Muqdisho aanay aheyn madaafiic hoobiyeyaal ah.
Shaqaale Ajnabi u shaqeynaysay Hey’adda ICRC oo caawa lagu afduubtay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 2, 2018
Warar goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Haweeney ka mid aheyd shaqaalaha Ajaaniibta Hey’adda ICRC lagu afduubtay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo qaabka afduubka u dhacay.
Faahfaahin ka soo baxaysa Haweeney lagu diley suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku aadan ruux dumar ah oo lagu dhex diley suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ee Bakaaraha.
Wasiirka Amniga oo kormeeray waddooyinka laga soo galo magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 28, 2018
Wasiirka Amniga Gudaha Maxamed Cumar Islow oo ay wehliyeen Taliyeyaasha ciidamada iyo Guddoomiyaha G/Banaadir ayaa kormeeray waddooyinka laga soo galo magaalada Muqdisho, halkaasoo ay koontaroolo ku leeyihiin Ciidamada NISA.
Diiwaan gelinta Musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta ku eg
Sagal Radio Services • News Report • April 24, 2018
Waxaa maanta oo Talaado ah ku eg diiwaan gelinta Musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka, iyadoo guddiga qaban qaabada doorashada uu ku dhawaaqay in wixii ka dambeeya gelinka dambe ee maanta la soo gabagabeynayo diiwaan gelinta.
Shirkii Golaha Wasiirada oo maanta loogaga hadlay xaaladda kala guurka ee ciidamada AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • April 20, 2018
Diyaaradii Malaayiinka Doolar usiday Imaaraatka Carabta oo la fasaxay.
Warar Dheeraad ayaa ka soo baxay Diyaarad laga leeyahay Imaaraatka Carabta oo Galabta lagu qabtay Garoonka Magaalada Muqdisho, kadib markii la helay iney siday lacag aad ufara badan.
Tababarka Ciidamada Soomaaliya lagu siiyo Saldhigga Milateri ee Turkiga
Warbaahinta Turkiga ayaa markii u horeysay muuqaal iyo warbixin ka soo qaaday Saldhigga Milateri ee Turkiga ku leeyahay Muqdisho, halkaasoo lagu tababaro Ciidamo Soomaali ah.
Tartanka Orodka gaaban oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho (Sawirro)
Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari oo dalbaday in loo soo celiyo Ilaaladiisa
Sagal Radio Services • News Report • April 5, 2018
Xildhibaanada la baxay Badbaadada Baarlamaanka oo xalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Taliyeyaasha ciidamada aanay dhex dhexaad ka aheyn xaalada siyaasadeed ee uu dalka galay.
Faah Faahin: Kulanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Safiirka Imaaraadka Carabta ee Muqdisho
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya C/qaadir Axmed Kheyr Abdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi.
Shan carruur ah iyo hooyadood oo ku dhintey guri ku gubtay magaalada Muqdisho
Shan carruur ah,hooyadood iyo qof marti u ahayd ayaa ku dhintey kadib markii saqdii dhexe ee xalay uu dab qabsaday guri ku yaal degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
Deg-Deg qarax miino oo goordhaw ka dhacay duleedka Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • March 10, 2018
Deegaanka weeydoow ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa goordhaw ka dhacay qarax miino oo lala beegsaday Gaari nuuca Cabdi bile loo yaqaano oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda.
Sawirro: Goobtii Uu Qaraxu Ka Dhacay
Adeeg Caafimaad bilaash ah oo lagu maamuusayo sanad-guuradii 1aad ee doorashada Farmaajo (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • February 8, 2018
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay doorashadii Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socday barnaamijyo sama fal ah oo adeeg caafimaad lacag la’aan loogu sameynayo dadka danyarta ah.
Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir
Sagal Radio Services • News Report • January 21, 2018
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhaw wareegto uu soo saaray u magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow oo horay u ahaa Wasiirka Warfaafinta, iyadoo dhamaan xilalka laga qaaday xubnihii hayay xilka Guddoomiye ku-xigeenada iyo Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobolka.
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii Dugsiga Booliska iyo Al-Shabaab oo sheegtay in 27 askar ku dishay
Sagal Radio Services • News Report • December 14, 2017
Sagal Radio Services • News Report/Video • November 15, 2017
Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Maryan Qaasim Axmed ayaa goor dhow waxay iska casishay xilkaasi.
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2017
Wasiirkii Arrimaha Gudaha Koofur Galbeed oo ku dhintay weerarkii Hotel Naasahablood 2
Wasiirkii Arrimaha Gudaha Maamulka Koofur Galbeed Madoobe Nuunow Maxamed ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday weerarkii galabta lagu qaaday Hotelka Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho.
Maxamed Yuusuf Tigey oo xubin ka ahaa Guddiga Qaran ee Taakuleynta iyo wacyigelinta Ciidamada qalabka sida ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xubinimada Guddiigaas.
Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama
Sagal Radio Services • News Report • September 11, 2017
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay Wadada maka Al-Mukarama, kaasoo laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Banaan bax looga soo horjeedo dadkii shalay lagu dilay Bariire oo ka dhacay Afgooye
Sagal Radio Services • News Report • August 26, 2017
Banaan bax looga soo horjeedo dadkii rayidka ahaa ee shalay lagu dilay agagaarka deegaanka Bariire ayaa maanta ka dhacay degmada Afgooye iyo deegaanka Ceelasha Biyaha.
Madaxweynaha oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirada labo dal oo Midowga Yurub ka tirsan(Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • August 1, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta si kala gaar gaar u qaabilay Safiirada labo dal oo ka tirsan Midowga Yurub, kuwaasoo uu ka guddoomay waraaqaha aqoonsiga ee Danjirnimo.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Canshuuraha oo saaka lagu dilay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • July 10, 2017
Kooxo Hubeysan oo mooto saarnaa ayaa saaka degmada Hodan ku dilay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Canshuuraha Munishiibiyada ee dowladda Hoose oo l, iyadoo dilkii labaad oo 24-saac gudahood loogu geysto magaalada Muqdisho.
Meydad laga soo saaray Maqaayadda Pizza, iyo khasaaraha weerarkii xalay oo kordhay
Sagal Radio Services • News Report • June 15, 2017
Madaxweynaha oo garoonka diyaaradaha kaga guddoomay waraaqaha aqoonsiga Safiirka Canada
Sagal Radio Services • News Report • June 8, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maalin ka hor waxaa uu garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho waraaqaha aqoonsiga kaga guddoomay Safiirka cusub ee Canada u qaabilsan Soomaaliya oo aan degenaansho ku yeelan doonin Muqdisho.
Gaari ay leeyihiin AMISOM oo dab ku qabsaday agagaarka Isgoyska KM4 (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • June 1, 2017
Gaari kuwa qafilan oo ay leeyihiin Ciidamada AMISOM ayaa ku gubanaya agagaarka Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho, kaddib markii ay soo wajahday cilad dhanka Dabka ah.
Ciidamada dowladda oo toogasho ku dilay darwal waday gaari Caasi ah magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 28, 2017
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan isgoyska Dan-wadaagta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa barqanimdii maanta toogasho ku dilay darawal waday gaari Caasi/Hoomey ah oo laga shakiyay.
Maxaa kasoo baxay kulankii Wadatashiga Madaxda Qaran iyo Madaxda Maamul-Gobolleedyada?
Sagal Radio Services • News Report • April 17, 2017
Sanadkan 2017-ka imisa qof oo shacab ah ayaa ku geeryooday Qaraxyadii Soomaaliya ka dhacay?
Sagal Radio Services • News Report • April 13, 2017
Sanadkan 2017-ka, 337 qof oo shacab ah ayaa ku geeryooday 87 Qarax oo ka dhacay Soomaaliya. Khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaaray qaraxyada ayaa 50% sara u kac uu ku yimid marka loo eego sanadkii 2015.
DEG DEG: Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay agagaarka Wasaaradda Gaashaandhigga
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhaxay meel ku dhow Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray kolonyo ciidan oo ay la socdeen Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta la wareegaya xilka, Xaflad ka dhaceysa Madaxtooyada
Qaban qaabadii u dambeysay ee uu xilka kula wareegayo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka socota xarunta Madaxtooyada, iyadoo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta si rasmi ah xafiiska u baneyn doono.
Dabbaal dagga guusha Farmaajo oo khasaare geystay
Ayadoo caasimada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka iyo dibada ahba looga dabbaal dagay xalay guusha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku guuleystay doorashadii xilka madaxweynenimo ayaa khasaare dhimasho iyo dhawaacba leh ay dabbaaldagyadu geysteen magaalooyinka dalka qaar.
Ciidamada booliska oo adkeynaya amaanka Muqdisho inta doorashooyinka socdaan
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2016
Taliska ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay iney adkeynayaan amaanka magaalada Muqdisho inta lagu gudo jiro doorashooyinka, gaar ahaan doorashada madaxweynaha iyo hogaanka baarlamaanka.
Shir ay isugu yimaadeen Madaxda Garoomada diyaaradaha Soomaaliya ayaa ka dhacay Xarunta Hey’adda Socdaalka iyo Saadaasha Hawada Soomaaliya ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Faahfaahin ka soo baxaysa gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabtay Muqdisho(Sawiro)
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay gaari waxyaalaha qarxa lagu soo raray oo lagu qabtay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Faah faahin Qaraxyadii lagu weeraray Xarunta Dambi baarista ee CID (Sawirro)
Warar dheeraad ayaa ka soo kordhaya qaraxyo ismiidaamin ah oo lagu weeraray xarunta CID-da ee dambi baarista Booliska Soomaaliya, iyadoo ciidamada booliska ay toogteen dabley isku dayday inay gudaha u galaan xarunta.
Madaafiic hoobiyeyaal oo xalay saqdii dhexe lagu garaacay Xerada Xalane
Sagal Radio Services • News Report • May 3, 2016
Dhowr madaafiic ayaa xalay abaarihii 1-dii saq dhexe lagu garaacay Xerada Xalane ee ku dhegan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, halkaasoo Talis u ah howl galka AMISOM.
Laamaha Amniga oo sheegay in la soo qabtay rag lagu tuhmayo dilalkii ka dhacay Muqdisho
Hey’addaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howl galo saacadihii la soo dhaafay laga sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir lagu soo qabtay dad looga shakisan yahay dilalkii 48-kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Warar faahfaahsan oo ka soo baxaya dab ka kacay suuqa degmada Wadajir
Qaaraha uu geystey dab ka kacay suuqa weyn ee degmada Wadajir kaasoo baabi’iyay qeybo ka mid ah degmada Wadajir.
Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo ku dhaawacantay qarax loogu xiray gaari ay wadatay
Hindiya Xaaji Maxamed oo ka mid ah Wariyeyaasha Raido Muqdisho iyo SNTV ayaa goor dhow ku dhaawacantay qarax loogu xiray gaarigeeda, xilli ay ka soo baxday Jaamacad ay dhigeyneysay.
Daawo Sawirrada Weerarkii Caawa lagu qaaday Hotelka Wehliye iyo Meydadka Ragii Weeraray oo lasoo bandhigay
Waxaa xalay xiligii afarka Weerar isugu jira Ismiidaamin iyo mid toos ah rag hubeesan oo katirsan Xarakada AL-Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Wehliye oo kuyaala Laamiga Maka Al-MUkarama ee Magalaada Muqdisho.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibada dalka India General Vijay Kumar Singh ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho,iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qaabilay Xarunta Madaxtooyada.
Gudoomiyeyaal degmo xilka laga qaaday iyo kuwo cusub oo la magacaabay (Akhriso wareegtada)
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Gudoomiyeyaasha degmooyinka Hodan iyo Dharkeenley xil ka qaadis lagu sameeyay, kadib wareegto ka soo baxday Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa.
Qaybo ka mid ah Waddooyinka Muhiimka ah ee Caasimadda oo Saaka la Xiray
Sagal Radio Services • News Report • April 4, 2015
Qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee Muqdisho ayaa saaka xiran; kaddib markii waddooyinkaasa la dhigay ciidan ka tirsan kuwa dowladda Somalia.
Wasaaradda Amniga oo shaacisay in heegan la geliyay Ciidamada Ammaanka
Wasaarada Amniga Gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka, iyadoo howl gallo ballaaran ay ka socdeen qeybo ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir.
Ciidamada Ammaanka oo howl gallo ka wada qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • March 5, 2015
Ciidamada ammaanka ayaa howl gallo ka wada qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamadan oo ku sugan inta badan isgoysyada wadooyinka muhiimka ah waxay baaritaan si feejignaan ku dheehan tahay ku sameynayan gaadiidka.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa markii u horeysay maanta ka hirgeliyay Wadada Warshadaha Nalalka ku shaqeeya Cad-ceeda, iyadoo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir uu wax ka rakibay nalalkaas.
Xaflad lagu taageerayay mashaariicda horumarineed ee Turkiga ka hirgelisay Muqdisho oo xalay la qabtay
Xaflad lagu taageerayay mashaariicda horumarineed ee ay dowladda Turkiga ka hirgelisay magaalada Muqdisho, laguna soo dhoweynayay booqashadii Madaxweyne Recep Tayyib Erdogan ee shalay dalka ku yimid ayaa xalay lagu qabtay xarunta dowladda Hoose ee Xamar.
Madaxweynaha Turkiga oo si rasmi ah u furay Terminalka cusub ee Garoonka diyaaradaha Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 25, 2015
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa furay Terminalka cusub ee garoonka oo ay dayactirtay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
DEG DEG: Madaxweynaha Turkiga oo goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Diyaarada sida Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa goor dhow soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo la filayo inuu salaan sharaf ka qaato cutubyo ka tirsan Ciidanka qalabka sida.
Agaasimihii Wasaarada Haweenka oo xalay lagala baxay Gurigiisa oo ku yaal degmada Waabari
Sagal Radio Services • News Report • December 11, 2014
Agaasimihii Wasaarada Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadii kalsoonida lagala laabtay Maxamed Cumar Maxamed ayaa xalay gurigiisa oo ku yaal degmada Waabari lagala baxay.
Saxaafada Muqdisho oo soo dhaweysay Qabashada Xasan Xanafi
Kulankaan oo ahaa mid lagu soo dhaweynayo Qabashada Xasan Xanafi Xaaji oo ah Sargaal Shabaab ka tirsan islamarkaana Shabaab u qaabilsanaa Dilalka iyo Dabagalka Wariyaasha ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah Macalimiinta Jaamacada SIMAD oo saakay lagu dilay Muqdisho
Kooxo Hubeysan ayaa goor dhow oo saakay ah ku dilay magaalada Muqdisho mid ka mid ah Macalimiinta Jaamacada SIMAD, iyadoo kooxihii hubeysnaa ay baxsadeen.
Faah-faahin Weerarkii Degmada Xamar-weyne
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weerar ka dhacay Degmada Xamar-weyne ee Gobolka Banaadir,gaar ahaan Isgooyska Via Rooma,waxaana Weerarkaasi lagu Dilay Saddex Ruux,iyadoo uu ku dhaawacmay Qof kale.
Dhallinyaro Midiyo ku hubeysan oo degmada Hodan ku dilay qof Haweeney ah
Rag ku hubeysan midiyo ayaa calay ku dilay xaafada Jaamacadaha ee degmada Hodan haweeney ka mid ah dadka xaafaddaas ku nool, waxaana wararku sheegayaan raggii dilka geystay inay baxdaseen.
Xoghayaha Guud ee QM iyo Wafdi uu Hoggaaminayo oo Muqdisho soo gaaray
Wafdi uu hoggaaminayo xoghayaha guud ee QM, Ban Ki-Moon ayaa Muqdisho soo gaaray goor dhow, iyadoo wafdiga uu ka mid yahay guddoomiyaha bangiga Adduunka.
Daawo Sawirada Goobtii qaraxa dadka badan ku dhinteen ee magaalada Muqdisho oo aad ilxumo uga Muuqato
Warar dheeri ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay baar ku yaalla waddada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan baar ay dad badan ka qaxweynayeen, iyadoo 15-qof ay marayso tirada dadka ku dhintay qaraxan, iyadoo 20-qof oo kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo kala duwan.
War Deg Deg Ah Mid kamid ah Wariyaasha ugu Caansan Muqdisho oo Goordhaw la dhaawacay
Wararka aan goordhaw helnay ayaa sheegaya in Kooxo Hubeesan oon wali heebtooda la garan ay Rasaas ku fureen gaari uu watay Mid kamid ah Wariyaasha ugu caansan Magaalada Muqdisho kana howlgalayay Telefishinka Somali Chanell.
Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda oo ku dhintay Qarax ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • September 17, 2014
Ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan cidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax miino oo lagula eegtay maanta agagaarka warshaddii hore ee caanaha oo ku taalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Howlgal lagu qabtay dhallinyaro badan oo laga sameeyay Degmada Wadajir
Howlgal lagu soo qabqabtay tiro dad ah lagu soo qabqabtay ayay ciidamada booliiska iyo nabadsugidda Somalia ka sameeyeen maanta xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, iyadoo hakad la geliyay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga intii uu howlgalku socday.
Sarkaal ka tirsanaa argagaxiso la dirirka nabadsugidda oo toogasho lagu dilay
Sarkaal sare oo ka tirsan hay’adda nabad-sugidda Qaranka ayaa goor-dhow lagu dilay Muqdisho, kaddib markii kooxo hubeysan oo gaari wadatay ay ku weerareen meel ku dhow isgoyska Zope.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Muqdisho oo bilaabay in ay gacanta ku dhigaan Kooxaha hubeesan ee dilka u geesta
Shacabka Magaalada Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay in ay ku dhiiradaan in ay gacanta kusoo dhigaan raga Bistooladaha hubeesan ee dilalka qorsheesan inta badan ka geesta Qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka oo saakay howl gallo ka wada wadooyin ka mid ah Muqdish0
Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa saakay howl galo ka duwan kuwii hore ka wada wadooyin dhowr ah oo ku yaal Caasimada, iyadoo la baarayo dadka iyo gaadiidka.
Madaafiic khasaare nafeed sababay oo xalay lagu duqeeyay degmada Wadajir
Ugu yaraan saddex qof ayaa geeriyooday, toddoba kalena way ku dhaawacmeen madaafiic ku dhacay xaafadda Buulo-xuubeey ee degmada Wadajir saqdii dhexe ee xalay, kuwaasoo aan la ogeyn halka laga soo tuuray.
Daawo Sawirada Taliyaha ciidammada Mareykanka ee Geeska Afrika oo Muqdisho yimid lana kulmay Taliyaal Ciidan
Taliyaha ciidammada Mareykanka ee dalalka Geeska Afrika Jeneral Well Crisp oo shalay Muqdisho soo gaaray ayaa booqday xarunta Villa Baydhaba iyo Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo uu soo indho indheeyay dhammaan qeybaha ciidammada iyo sida ay u shaqeeyaan, halkaasi oo uu war-bixinno ka dhageystay saraakiisha madaxda ka ah xarumahaasi uu maanta booqday.
Wararkii ugu danbeeyay weerar saakay lagu qaaday Sarkaal ka tirsanaa Nabad Sugida Soomaaliya
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar kooxo hubeysan ay saaka ku qaadeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan Hey;ada Nabadsugida, iyadoo weerarkan lagu dilay labo ruuxhalka mid kalena lagu dhaawacay.
Daawo sawirada:Dawlada Soomaaliya oo manta aqoonsi siisay Maamulkii sadaxda Gobal ee Baydhabo lagu dhisay
Laamaha amaanka oo soo saaray digniin 10 Al Shabaab is qarxi raba oo Muqdisho soo galay
Sagal Radio Services • News Report • June 21, 2014
Afhayeenka laamaha Amniga Somalia Mudane Qaasim Axmed Rooble oo Galabta Saxaafada la hadlay ayaa waxaa uu Bixiyay Digniin ah in Magaalada Muqdisho ay soo Galeen Gawaari is Qarxi Rabta oo Al Shabaab ay soo Direen kuwaas oo uu soo Bandhigay Xogtooda oo dhamees tiran.
Sarkaal ka tirsanaa Ha’yadda Nabadsugidda Qaranka oo Muqdisho lagu dilay
Sarkaal ka tirsan hay’adda nabad-sugidda Qaranka ayaa saakay lagu toogtay xaafadda Korontada ee degmada Wadajir, xilli uu u socdya shaqadiisa, iyadoo kooxaha dilka geystayna ay baxsadeen.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo baaritaano guri guri ah ka sameeyay saakay Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • June 7, 2014
Ciidamada dowlada oo isugu jira Boolis iyo nabad sugid oo gacan ka helaya kuwa AMISOM ayaa xalay saqdii dhexe illaa saaka howlgal balaaran ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada H/wadaag ee magaalada Muqdisho.
Madfac khasaare sababay oo xalay ku dhacay Xaafada Juungal ee Yaaqshiid
Sagal Radio Services • News Report • May 31, 2014
Cunug yar ayaa ku dhintay wiil yar iyo hooyadiisna way ku dhaawacmeen madfac xalay ku dhacay xaafadda Juungal ee degmada Yaaqshiid, kaasoo aan la ogeyn halka uu ka yimid.
Madaafiic Dhimasho iyo dhaawac sababtay oo xalay lagu garaacay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 20, 2014
Madaxweynaha Somalia oo Khudbadda ka jeediyey Munaasabadda 15-ka May
Sagal Radio Services • News Report • May 16, 2014
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud caawa khudbad ka jeediyey munaasabadda 15-ka May oo xalay Muqdisho lagu qabtay, isagoo ka hadlay baaqii ay xildhibaanno ka tirsan baarlmaaanku dhawaan u soo jeediyeen.
15 May oo manta laga xusay Soomaaliya
Munaasabad lagu maamuusayay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Bannaanbax lagu taageerayo Madaxweynaha Soomalia oo ka socda Muqdisho
Dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha Somalia, Xasan Sh. Maxamuud ayaa haatan ka socda garoonka kubada cagta Banaadir ee degmada C/casiis halkaasoo ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan.
Shir Ammaanka Qaranka looga hadlayo oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 20, 2014
Shir socon doona saddex maalmood oo looga hadlayo ammaanka dalka ayaa maanta ka furmi doona magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qeyb geli doonaan Hey'adaha Amniga dowladda, Saraakiil ciidan, maamulada gobolada dalka, khubaro xaga amniga ah iyo Taliyeyaal hore.
Daawo sawirada:Buri’ Hamza oo ku soo dhoweeyay Muqdisho 82 ruux oo Soomaali ah oo laga soo daad gureeyay Kenya .
Sagal Radio Services • News Report • April 10, 2014
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga H.E. Buri’ Mohamed Hamza ayaa maanta ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha caasimadda Muqdisho 82 ruux oo muwaadiniin Soomaali ah oo qaxooti ku ahaa Magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya , kuwaasoo dalka dib loogu soo celiyay .
Ciidamo Boolis ah oo maanta is hortaagay banaanbax ka dhacayey Muqdisho loogana soo horjeeday Falka Kenya ay kula kacday somaalida dalkaasi ku nool
Sagal Radio Services • News Report • April 9, 2014
Banaanbax nabadeed oo ay soo qaban qabiyeen Shacabka gobolka Banaadir islamarkaana looga soo horjeeday tacadiyada ciidamada Kenya ku bartilmaameedsanayaan Shacbka Soomaaliyeed ee kusugan dalkaasi ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Muqdisho oo qof lagu dilay labana lagu dhaawacay
Hal qof ayaa xalay lagu dilay magaalada Muqdisho, labo qof oo kalena waa lagu dhaawacay, falalkaas oo siyaabo kala duwan ay u fuliyeen kooxo hubeysan.
17 qof oo lagu qabtay howlgallo amni oo laga sameeyay Muqdisho
Wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgallo dad lagu qabtay oo ciidamada amnigu maalmihii la soo dhaafay ka fuliyeen qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka KMG ah ee Jubba oo lagu soo dhoweeyay Muqdisho (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 6, 2014
Munaasabad lagu soo dhaweynayey madaxweyne ku xigeenka maamulka KMG ah ee Jubba Cabduqaadir Xaaji Maxamed Suldaan Lugadheere, isla markaana warbixin looga dhageysanayeyayaa lagu qabtay magaalada Muqdiso .
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta la shiray xubnaha kooxda G7+ oo ah deeq bixiyeyaasha ugu muhiimsan ee bixiya dhaqaalaha ku baxa barnaamijka New Deal (Hiigsiga cusub), waxaana Ra’iisul Wasaaruhu uu warbixin dheer ka siiyay horumarada howlgalada ka soconaya gobolada dalka oo ee looga xoreynayo kooxaha nabadiidka ee Shabaab goobaha ay weli ku harsan yihiin.
Hoobiyaal Qasaare geestay oo xalay kusoo dhacay Xaafado kamid ah Magaalada Muqdisho
Waxaa Xalay Qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho kusoo dhacay tiro hoobiyaal ah kuwaa oon wali si rasmi ah loo ogeyn halka laga soo tuuray iyo bartilmaameedkooda rasmiga ah.
Wararkii Ugu Dambeeyay Weerar Ismiidaamin ah oo lagu qaaday Hotelka Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay oo maanta lagu qaaday Hotelka Makala Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Dowlada Soomaaliya oo sheegay in ay Muqdisho wajaheyso Dagaal ka dhan ah Shabaab
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Muqdisho uu kusoo wajahan yahay dagaal, loogana baahan yahay shacabka Soomaaliyeed gacan ku siiyaan dowladda sidii dagaalkaas looga hor-tegi lahaa.
Ajaaniib lasoo Tarxiilay oo laga soo dajiyay Magaalada Muqdisho iyo Dowlada oo ka hadashay arintaasi
Mudooyinkii ugu dambeeyay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa kasoo dagayay diyaarado dhoor ah oo waday boqolaal Soomaali laga soo tarxiilay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Faah faahin qaraxii agagaarka KM-0 oo la sheegay in ilaa 10 ruux ay ku dhinteentira intaasi ka badana waa ay ku dhaawacantay
Ugu yaraan 10 ruux ayaa ku geeriyootay qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay nawaaxiga KM-0, gaar ahaan goob maqaaxi ah.
Dagaal iyo duqeyn xalay ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Huriwaa
Dagaal iyo madaafiic culus ayaa xalay ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Huriwaa, kaasoo saameyn ku yeeshay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir oo aad looga maqlayay hugunka hubka la isku weydaarsanayay.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ku tilmaamay madaafiicdi xalay inay ahaayeen kuwo dheemish ah
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka hadlay madaafiicdii xalay ka dhacayay magaalada Muqdisho, kaasoo qal qal badan ku abuuray shacabka ku nool degmooyinka, iyadoo ilaa iyo hada aan la soo sheegin wax qasaare ah oo ay geysatay.
Mas’uuliyiin ka warbixiyay duqeymihii Muqdisho iyo dad loo qabqabtay
Olole ka dhan ah Golaha Wasiirada cusub oo ka socda Hotelada Muqdisho
Olole ka dhan ah Golaha Wasiirada cusub ee uu soo magacaabay habeen hore Ra'iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed ayaa ka socda qaar ka mid ah Hotelada ku yaal magaalada Muqdisho, halkaasoo ay is uruursi ka wadaan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
Daqliga Dowladda ka soo Galo oo aad u kordhay kadib Markii ay la wareegtay shirkad laga Lee yahay Dalka Turkiga howlihii Garoonka Muqdisho.
Kadib Markii 15-kii September 2013 ay la wareegtay Shirkadda Favori ayaa waxaa Laga Qabtay Dakhli Dhan $1.1 million Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya Dowladda ayaana Daqligaasi Heshay.
Magaalada Muqdisho ayaa manta jawi ahaan waxa ay wax badan ka badalan sidii hore
Jawiga Magaalada Muqdisho ayaa maanta ah mid wax badan ka badalan sidii hore iyadoona maanta Magaalada uu ka da'ayo roob ay dadka iyo duunyadaba ku diirsadeen.